क्रोएशिया अन्तिम १६ मा, यसरी अर्जेन्टिनाको झिनो सम्भावना कायमै
काठमाडौं । बिहीबार राति सम्पन्न विश्वकपको समूह चरणको खेलमा अर्जेन्टिनालाई क्रोएशियाले ३–० गोलले पराजित गरेपछि क्रोएशिया अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ । क्रोएशियाले खेलको दुबै खेलमा जित निकालेर ६ अंक जोडेर अर्को चरण प्रवेश गरेको हो ।
विश्वकपको पहिलो खेलमा लडखडिएको अर्जेन्टिनाले क्रोसियालाई पछार्ला त ?
काठमाडौँ । आज राति नेपाली समयअनुसार ११ः४५ बजे अर्जेन्टिना र क्रोसिया आमनेसामने गर्दैछन् । पहिलो खेलमा आइसल्याण्डले
अर्जेन्टिनाका लागि विश्वकप सुखद सुरुवात भएन, मेस्सीले पेनाल्टी मिस गरे
विश्वकप अपडेट । रसियामा जारी विश्वकपमा अर्जेन्टिना र आइसल्याण्डबिचको खेल एकएक गोलको बराबरीमा सकिएका छ ।
विश्वकप अपडेट: पहिलो हाफमा आइसल्याण्ड अर्जेन्टिनामाथि भारी
रसियामा जारी विश्वकपमा अर्जेन्टिना र आइसल्याण्डबिचको पहिलो हाफ खेल एकएक गोलको बराबरीमा सकिएका छ ।
आइसल्याण्डलाई अर्जेन्टिनाले पराजित गर्ला त ? नेपाली ज्योतिषले गरे यस्तो भविष्यवाणी
अर्जेन्टिनालाई रसिया विश्वकको उपाधि जित्ने दाबेदार राष्ट्रको रुपमा हेरिएको छ । आइसल्याण्डको भने यो नयाँ अनुभव हुनेछ ।
अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय टोलीबारे अजबगजबका कुराहरु
अर्जेन्टिनाले पहिलो आधिकारिक खेल सन् १९०१, मे १६ मा उरुग्वेविरुद्ध खेलेको थियो । उरुेग्वेको मोन्टेभिडियोमा भएको उक्त खेल अर्जेन्टिनाले ३–२ गोलले जितेको थियो ।
विश्वकप दाबेदार अर्जेन्टिनाबारे जान्नुहोस् रोचक कुराहरु
विश्वमा फुटबलका कारण परिचय बनाएको देश हो अर्जेन्टिना । यो देशका खेलाडीहरुबारेमा जति थाहा छ देशका बारेमा भने कमैलाई थाहा छ ।